OTU ESI EMEPỤTA ỤLỌ NA TEAMSPEAK 3 - TEAMSPEAK - 2019
Usoro maka ịmepụta ụlọ na TeamSpeak
Dị ka ị maara, ịtinye gam akporo os na ngwaọrụ ndị ejiworo rụọ ọrụ ruo ọtụtụ afọ bụ ezigbo ohere iji wepu ọtụtụ nsogbu, melite arụmọrụ arụmọrụ nke ọtụtụ ngwa ngwa ngwa, na mgbe ụfọdụ, ọ bụ naanị ihe ngwọta maka nsogbu nke iweghachi ngwaọrụ ahụ dum. Tụlee ụzọ ndị ị nwere ike isi gbanye ihe nlereanya nke ama Lenovo S650 (Vibe X Mini).
Usoro dị iche iche akọwapụtara na ihe a na-eweta ihe ize ndụ ma nwee ike imebi usoro ngwanrọ nke ngwaọrụ ahụ! Onye nwe ama ama na-eme ihe niile na nsogbu ya na ihe ize ndụ ya, ọ bụkwa ọrụ zuru oke maka nsonaazụ ahụ, gụnyere ndị na-adịghị mma!
Ọ bụrụ na ị kpebie ịmepụta Lenovo S650 onwe gị, ị ga-amụta ụkpụrụ nke ịmepụta na ngwanrọ ọkachamara ma mụta ụfọdụ echiche. Ọ dị mkpa ịmalite nzọụkwụ site na nzọụkwụ: buru ụzọ chọpụta ihe mgbaru ọsọ kasịnụ nke nhazi ndị a na-aga n'ihu, kwadebe ihe niile ị chọrọ, wee gaa n'ihu ịtinye gam akporo na ngwaọrụ ahụ.
Ebe ọ bụ na ngwá ọrụ bụ isi nke na-enye ohere iji arụ ọrụ na ebe nchekwa nke gam akporo Android bụ PC, nke mbụ, ọ dị mkpa iji hụ na "nnukwu nwanne" nwere ike iji ngwaọrụ mkpanaka rụọ ọrụ site na ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka usoro niile nke ọrụ ikpeazụ.
Gụkwuo: Olee otú iji wụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka gam akporo firmware
A na-enweta ngwunye Windows nke na-enye mmekọrịta na Lenovo S650 n'ọtụtụ ụzọ, nke kachasị mfe bụ iji ojiji nke akpaaka. Ị nwere ike iji ọkwọ ụgbọ ala zuru ụwa ọnụ maka ngwaọrụ MTK, njikọ iji budata nke nwere ike ịchọta na isiokwu ahụ na njikọ ahụ dị n'elu, mana ihe ngwọta a pụrụ ịdabere na ya bụ iji ngwugwu ọkwọ ụgbọala nke sitere n'aka onye nrụpụta.
Gbaa ndị ọkwọ ụgbọala auto-installer maka ngwa ngwa Lenovo S650 smartphone
Gbanyụọ nkwenye mbinye aka nke onye ọkwọ ụgbọala ahụ n'oge oge nrụnye na usoro ntanetị.
Gụkwuo: Otu ị ga-esi gbanyụọ nkwenye ntinye aka nke ọkwọ ụgbọala na Windows
Download onye nhazi LenovoUsbDriver_1.1.16.exe na -eme faịlụ a.
Pịa "Na-esote" na windo abụọ mbụ nke ọkachamara nwụnye yana
pịa na "Wụnye" na windo ebe akpọrọ gị ịhọrọ ụzọ ị ga-esi kpochapụ faịlụ.
Chere maka faịlụ a ga-edegharị na kọmputa.
Mgbe ịdọ aka ná ntị gosiri na usoro ahụ enweghị ike ịchọpụta onye nkwusa onye ọkwọ ụgbọala, pịa "Wụnye".
Pịa "Emere" na windo ikpeazụ nke Wizard Wụnye. Nke a mejupụtara ntinye nke ndị ọkwọ ụgbọala maka Lenovo S650 - ị nwere ike ịga n'ihu iji chọpụta nhazi nke njikọ ha na Windows.
Nhọrọ. N'okpuru ebe a bụ njikọ iji budata ebe nchekwa ahụ nwere faịlụ ndị ọkwọ ụgbọala maka ajụjụ ekwentị ahụ, nke a kwadoro maka nhazi akwụkwọ.
Cheta ndị ọkwọ ụgbọala maka Lenovo S650 ama maka nhazi akwụkwọ
Ọ bụrụ n'oge nlele ọ na-egosi na n'ọnọdụ ọ bụla ngwaọrụ ahụghị usoro nke ọma, tinye ihe ndị ahụ site n'ike, na-eme ihe kwekọrọ na ndụmọdụ sitere na isiokwu na-esonụ na ebe nrụọrụ weebụ anyị.
More: Echichi ịkwọ ụgbọala na Windows na-amanye
Iji mezue ntinye ntinye nke gam akporo na Lenovo S650 site na kọmputa, ọ ga-adị mkpa iji usoro ịmepụta pụrụ iche nke ọrụ ama; mgbe ị na-eduzi usoro ndị metụtara ya, ị nwere ike ịnweta ịnweta ngwaọrụ site na interface ADB, na iji wụnye fatịlaịza gbanwere, gbanwee gaa na ebe mgbake. Tulee etu esi esi sụgharịa ngwaọrụ ahụ n'ime ụdịdị a kapịrị ọnụ, ma n'otu oge ahụ jide n'aka na arụnyere ọkwọ ụgbọala niile n'ụzọ ziri ezi.
Meghee "Onye njikwa ngwaọrụ" Windows, gbanye ekwentị gaa na nchịkọta ndị a.
MTK Preloader. N'agbanyeghị nke steeti ngwanrọ nke ekwentị ahụ, ọnọdụ ọrụ a na-enye gị ohere ịdeba data n'ime sistemụ sistemụ nke ebe nchekwa ahụ site na iji ngwanrọ pụrụ iche, nke pụtara ịwụnye mobile OS. Iji tinye ọnọdụ, gbanyụọ ngwaọrụ ahụ, wepụ ma regharịa batrị, wee jikọọ eriri nke metụtara kọmputa na ngwaọrụ ahụ. Na windo "Onye njikwa ngwaọrụ" ihe ahụ ga - apụta maka oge dị mkpirikpi "Lenovo PreLoader USB VCOM".
USB debugging. Maka ọtụtụ usoro metụtara itinye aka na usoro nke ngwaọrụ gam akporo (dịka ọmụmaatụ, ịnweta ikike nchịkwa), ị ga-achọ ime ka ikike ị nweta ekwentị site na AndroidDebugBridge. Iji mee ka nhọrọ kwekọrọ na ya jiri ntụziaka site na ihe ndị na-esonụ.
Gụkwuo: Otu esi enyere USB debugging na gam akporo
Na "DU" A ga-akọwa Lenovo S650 na ọnọdụ ntanetị dị ka ndị a: "Lenovo Composite ADB Interface".
Iweghachite. E nwere ike iji ebe obibi mmeputa ụlọ ọrụ dị ọcha iji chebe ihe nchekwa ngwaọrụ ahụ ma tọgharịa ya na ntọala ụlọ ọrụ, yana ịwụnye nchịkọta ngwugwu Android. Nweghachi mgbake na-enye ohere maka ịmalite ọrụ, gụnyere ịgbanwe ụdị Os site n'aka onye ọrụ ahụ na omenala. Ihe ọ bụla agbakebere na ekwentị, ọ na-esite na nkwụsị ala site na ịpị ma jigide mkpịsị ugodi atọ ọ bụla ruo mgbe njirimara gburugburu ebe obibi gosipụtara na ihuenyo.
Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ igbanwe mobile OS (dịka ọmụmaatụ, ihichapụ ngwa ngwa) ma ọ bụ mejuputa ikike ịmepụta ndabere nke usoro ahụ dum, ọ bụghị naanị na onye ọrụ data, ị ga-achọ inweta ohere ndị Superuser. N'ihe gbasara Lenovo S650, ọtụtụ ngwaọrụ ngwanrọ egosiputa arụmọrụ ha, ọrụ bụ isi bụ iji nweta mgbọrọgwụ na ngwaọrụ gam akporo. Otu ngwá ọrụ dị otú ahụ bụ ngwa KingRoot.
Maka ịme ihe nlereanya a n'okpuru nchịkọta nke mgbakọ gam akporo, jiri ntụziaka dị n'isiokwu na-esonụ.
Gụkwuo: Otu esi enweta mgbọrọgwụ maka ikike iji gam akporo KingRoot
Usoro maka ịmepụta ngwa ngwa na ọtụtụ ụzọ gụnyere ịmechapụ ihe ncheta nke smartphone gam akporo, ya mere nkwado nke data Lenovo S650 na nchekwa ya bụ otu nzọụkwụ nke a na-agaghị enwe ike mgbe ọ na-akwadebe iji weghachite mobile OS.
Gụkwuo: Ozi ndabere site na ngwaọrụ Android tupu ikpuchi
Ọ bụrụ na ị naghị eme atụmatụ iji gbanwee iji kwadoro ngwa ngwa, ị nwere ike iji ngwanrọ nke Lenovo mepụtara iji chịkwaa ngwaọrụ gị dị iche iche nke ngwaọrụ iji chekwaa kọntaktsị, sms, foto, vidiyo, egwu site na nchekwa ekwentị na PC. Onye enyemaka aka.
Download Smart Assistant Manager na-arụ ọrụ na ekwentị Lenovo S650 site na saịtị ọrụ
Download ma dichapu ebe nchekwa ahụ nwere ihe ntanye nkesa Smart Assistant site na ebe nrụọrụ weebụ Lenovo site na ịpị njikọ dị n'elu.
Gbaa nhazi ahụ.
Pịa "Na-esote" na windo mbụ nke Wizard nwụnye.
Kwenye ịgụ nke nkwekọrịta ikike ahụ site na ịtọọ bọtịnụ redio ka "Echere m ..."wee pịa "Na-esote" otu oge ọzọ.
Pịa "Wụnye" na windo installer na-esote.
Chere maka components ngwanrọ ka arụnyere na kọmputa.
Pịa bọtịnụ ahụ nke na-arụ ọrụ mgbe ejiri ngwa ahụ. "Na-esote".
Na-enweghị iwepu ego site na igbe nlele "Ẹkedori mmemme"pịa "Emecha" na windo ọkachamara ikpeazụ.
Mgbe ịmalitere njikwa ahụ, gbanwee ya na Russian. Iji mee nke a, mepee ngwa ngwa (atọ dị n'elu windo gaa n'aka ekpe)
wee pịa "Asụsụ".
Lelee igbe nlele ahụ "Russian" wee pịa "OK".
Kwenye ịmalitegharịa nke Nchọpụta Smart site na ịpị bọtịnụ ahụ. "Malitegharịa ekwentị ugbu a".
Mgbe ị mepee ngwa, rụọ ọrụ na smartphone "USB debugging" ma jikọọ ya na kọmputa. Azịza na-agba ume site na gam akporo na ntinye ngwa ngwa site na gam akporo, wee chere minit ole na ole.
Mgbe onye nnyemaaka ahụ kpebiri ngwaọrụ ma gosipụta ozi banyere ya na windo ya, pịa "Nkwado".
Tinye akara akara karịa akara ngosi na-egosi ụdị data a na-edebe.
Kọwaa ụzọ na diski PC ebe faịlụ nchekwa ga-echekwa. Iji mee nke a, pịa njikọ ahụ "Dezie" isi ihe "Chekwa Ụzọ:" ma họrọ ndekọ achọrọ na windo "Chọgharịa nchekwa", gosi site na ịpị "OK".
Malite usoro nke ịdekọ ozi sitere na ebe nchekwa nke smartphone na ndabere site na ịpị bọtịnụ ahụ "Nkwado".
Chere maka data nchekwa site na Lenovo S650 iji mezue, ka ị na-ele ọganihu na windo SmartAssistant. Emela ihe ọ bụla n'oge usoro ahụ!
Pịa "Emere" na windo "Nkwado ndabere" ma kwụpụ ekwentị site na PC.
Iji weghachite ozi ndabere na ekwentị gị mgbe e mesịrị:
Jikọọ ngwaọrụ na Onye Enyemaka Ntanetị, pịa "Nkwado" na windo nke usoro ihe omume ma gaa na taabụ ahụ "Weghachite".
Lelee igbe dị na aha nke ndabere a chọrọ, pịa bọtịnụ ahụ "Weghachite".
Chọpụta akara ngosi nke ụdị data ị na-adịghị mkpa iji weghachite ekwentị gị, ma malite usoro nke ịnyefe ozi site na ịpị bọtịnụ kwesịrị ekwesị.
Chere ka usoro nchịkọta ahụ gwụchaa.
Mgbe ngosi ahụ gosipụtara "Weghachite zuru ezu" na nkwụ ọkwa, pịa ya "Emere".
Ihe ọzọ dị mkpa nke a ga-atụle tupu itinye aka na usoro software Lenovo S650 bu ihe gbasara nke puru imebi nkebi "NVRAM" nchekwa ngwaọrụ n'ime usoro nke edeghari edeghari. Ọ dị oké njọ ịmepụta nkwụsị nke ebe ahụ tupu ị gafee ma chekwaa ya na diski PC - nke a ga-enye gị ohere iweghachi ndị nyocha IMEI, yana arụmọrụ nke netwọk, na-enweghị ihe mgbochi mgbagwoju anya. A kọwaa usoro maka ịchekwa ma weghachite nkwado ndabere nke mpaghara ahụ akọwapụtara site na ụzọ dịgasị iche iche gụnyere n'ime ntụziaka. "Usoro 2" ma "Usoro 3"atụ aro n'okpuru ebe a.
Ụdị ụdị ncheta na ntanetị
Maka Lenovo S650, onye mepụtara emepụtala isi abụọ, budata usoro dị iche iche nke usoro ihe omume: MGBE (maka ndị ọrụ si n'akụkụ ụwa nile) na CN (maka ndị nwe ngwaọrụ, bi na China). Nchịkọta ọnụ ọgụgụ CNN enweghị mpaghara ebe ndị Russia, ma ihe kachasị mkpa bụ na ngwaọrụ ha na-achịkwa na-eji nhazi nke smartphone karịa ụdị usoro ROW.
Mgbanwe site na ntinye aka na CN na azụ bụ omume, a na-eme nke a site na ịwụnye mgbakwunye OS dị mma na ngwaọrụ sitere na PC site na ngwa SP Flash. Ọ nwere ike ịdị mkpa ka ịghachị ọzọ, gụnyere ntinye ntinye nke nhazi ngwa ngwa na mgbanwe ndị e mere maka ntinye "Chinese". Enwere ike ibudata nchịkọta nwere mgbakọ CN na ROW OS maka ihe nlereanya na ajụjụ a site na njikọ dị na nkọwa ahụ "Usoro 2" n'okpuru n'ime isiokwu.
Otu esi eme ka Lenovo S650 gbaa
Mgbe ọzụzụ gasịrị, ị nwere ike ịga n'ihu na nhọrọ nke usoro ọrụ sistemụ ga-emelite ma ọ bụ weghachite. Anyị na-akwado ka ị mara onwe gị na ụzọ niile akọwapụtara n'okpuru maka ngwa ngwa nke ngwaọrụ ahụ, kpebie ụdị nsonaazụ ị chọrọ iji mezuo, wee malite ịgbaso ntuziaka ahụ.
Usoro 1: Ngwaọrụ Lenovo
Ndị ọrụ nke S650 ndị chọrọ nanị melite nsụgharị nke ndịọrụ Gọọmentị arụnyere na ama ha, ụzọ kachasị mfe bụ iji ngwaọrụ ndị na-emepụta.
Ụzọ kachasị mfe iji nweta onye ọrụ ọhụụ ọhụrụ na-arụ na ngwaọrụ na ajụjụ Android anaghị achọ ihe ngwaọrụ ọ bụla ọzọ - arụmọrụ maka imelite Os dị n'ime ngwaọrụ ahụ.
Debe batrị batrị zuru ezu ma jikọọ netwọk Wi-Fi. Meghee "Ntọala" A gam akporo Na ndepụta nke parameters "Usoro" kpatụ ihe "Banyere ekwentị".
Aka "Nwelite usoro". Ọ bụrụ na mgbakwunye os os nke OS nke arụnyere na ekwentị dị na nkesa ahụ, a ga-egosipụta ọkwa kwekọrọ na ya. Tapnite "Download".
Chere ruo mgbe ngwugwu na components ga-ebudata site na sava Lenovo ka nchekwa nchekwa nke smartphone. Na njedebe nke usoro ahụ, ndepụta gosiri ebe ị nwere ike ịhọrọ oge maka imelite mbipute gam akporo. Na-agbanweghị ọnọdụ nke mgba ọkụ na "Melite ugbu a"aka "OK".
Ekwentị ga-amalite ozugbo. Ọzọ, usoro ihe omume ahụ ga-amalite. "Iweghachite Lenovo", na gburugburu ebe obibi nke a na-eme, gụnyere emelite nke os. Ọ na-adịrị gị ka ị hụ ndekọ ego pasent na ntinye ihe ngosi.
Usoro dum weere na-akpaghị aka na-ejedebe na mbido nke nsụgharị emelitere mobile OS.
Lenovo Smart nnyemaaka
Emeelarịrị n'isiokwu a dị n'elu maka ịkwado ngwanrọ sitere na ndị mmepe sitere na Lenovo, enwere ike iji ya rụọ ọrụ nke ọma iji melite S650 usoro software site na PC.
Gbaa onye nlere anya ma jikọọ ekwentị na komputa, na ime ya na njedebe "USB debugging".
Chere ruo mgbe a kwadoro ngwaọrụ ahụ n'usoro ihe omume, wee gaa "Flash".
Chere maka Onye Nlebara Enyemaka na-akpaghị aka chọpụta nsụgharị nke usoro ngwanrọ arụnyere na S650 ma chọpụta maka os ọhụrụ nke na-arụ ọrụ na sava ndị nrụpụta. Ọ bụrụ na ohere ịkwalite version gam akporo dị, na-abụghị ihe ahụ "Ụdị ọhụrụ:" Ọnụ ọgụgụ ụlọ nke usoro nwere ike ịrụnye na-egosipụta. Pịa na akara ngosi ihe ngwugwu na ichere ruo mgbe e natara ya na sava Lenovo.
Ị nwere ike ijikwa usoro nbudata site na ịmepe nhọrọ nchịkọta nhọrọ na ịhọrọ ihe ahụ Ebe Ntanetị.
Mgbe ịchọtachara nnata nke osụgharị mobile maka arụ ọrụ na ngwaọrụ ahụ, windo Ntinye aka Smart ga-arụ ọrụ. "Nwee ume", pịa na ya.
Kwenye arịrịọ ahụ ka ịmalite ịnakọta ozi sitere na ngwaọrụ site na ịpị òké "Nọgidenụ n'ihu".
Pịa "Nọgidenụ n'ihu", na-ekwenye na e mepụtara akara ndabere nke ozi dị mkpa dị na smartphone.
Ọzọ, mmelite nke android os ga-amalite, nke na-esonye site na mmụba na pasent pasent nke usoro na window usoro.
N'oge usoro mmelite ahụ, ngwa gam akporo Lenovo S650 ga-amalitegharịa na mmalite "Iweghachite"mgbe nke a gasịrị, enwere ike ịhụ usoro ahụ na ihuenyo nke ngwaọrụ ahụ.
Na njedebe nke usoro niile, ekwentị ga-amalite ozugbo na gam akporo emelitere. Ị nwere ike ịkwụpụ ngwaọrụ ahụ na PC, pịa "Emere" na windo Ntinye aka ma mechie ngwa.
Usoro 2: SP FlashTool
Ngwá ọrụ kachasị dị irè maka ịrụ ọrụ na usoro ngwanrọ nke smartphones dabere na Mediatek bụ ngwá ọrụ nke sitere n'aka ndị na-emepụta ihe nkesa ngwanrọ - SP FlashTool. N'ihe gbasara Lenovo S650, usoro ihe omume ahụ na-enye gị ohere ịrụ ọrụ dịgasị iche iche na mpaghara nchekwa mpaghara nke ngwaọrụ ahụ.
Hụkwa: Otu esi gbanye ihe ngwaọrụ Android site na SP Flash Tool
Ihe mbụ ị ga - eme iji nwee ike ịmepụta ngwa ngwa site na FlashTool bụ iji kwadebere kọmputa ahụ na ngwá ọrụ a. Ngwa ahụ anaghị achọ nkwụnye - naanị ibudata ebe nchekwa ahụ nke nwere ụdị nlele nke a na-elele anya nke ọma ma kpochapụ ya (ọkacha mma na mgbọrọgwụ nke diski disk).
Download SP Flash Tool v5.1352.01 maka Lenovo S650 femụwe
Nzọụkwụ nke abụọ bụ ịnweta ngwungwu faịlụ na ihe ndị ọzọ dị mkpa nke osịkal ọrụ osịpụtara maka ndenye na nchekwa nke smartphone. N'okpuru njikọ ị nwere ike ibudata ngwa ngwa ROW S308 (Android 4.4) na CN S126 (Android 4.2). Download ụdị ngwugwu a chọrọ ma gbanye ya.
Download ROW-firmware S308 nke smartphone Lenovo S650 maka nwụnye site na SP Flash Ngwá Ọrụ
Download CN-firmware S126 nke smartphone Lenovo S650 maka nwụnye site na SP Flash Ngwá Ọrụ
NVRAM ebe nchekwa
Dịka e kwuru n'elu, itinye aka na usoro nke software nke ngwaọrụ nwere ike iduga mbibi data na ngalaba nchekwa. "NVRAM"nwere akụkụ (gụnyere IMEI) dị mkpa maka ịrụ ọrụ ziri ezi nke usoro redio. Mee NVRAM nkwado, ma ọ ga - esiri ike ịsaghachi ọrụ nke kaadị SIM.
Nwee ngwa ngwa ngwa Flash, kọwaa ụzọ ị ga-esi gbasaa faịlụ site na ndekọ ahụ na ihe oyiyi ahọpụtara maka nhazi nke mgbakọ gam akporo.
Iji mee nke a, pịa "Ntugharị-nkedo", gaa na mpaghara ụzọ faịlụ MT6582_Android_scatter.txtpịa "Meghee".
Gbanwee na taabụ "Na-agụghachi",
wee pịa bọtịnụ ahụ "Tinye".
Pịa okpukpu abụọ na akara ahụ egosipụtara na isi ihe nke window window.
Na windo Explorer nke meghere, gaa na folda ebe ịchọrọ ịchekwa ndabere, wee dee aha nkwụnye faịlụ iji mepụta ma pịa "Chekwa".
Na mpaghara nke windo a chọrọ iji kọwaa adreesị mmalite na agwụcha nke blocks nke ebe a gụrụ site na ebe nchekwa, tinye ụkpụrụ ndị a, wee pịa "OK":
"Amalite Ozi" -0x1800000.
Pịa "Gụọ azụ" - Flashtool na-agbanwe na njikọ ntanetị njikere.
Ọzọ, jikọọ Lenovo S650 na njikọ USB nke PC. Mgbe oge ụfọdụ gasịrị, ịgụ data na ịchekwa nkwụsị ga-amalite. "NVRAM"-akara.
Echere nkwado ndabere zuru oke mgbe ọdịdị windo ahụ gosipụtara na ọganihu nke usoro ahụ - "Azaghachi OK".
Ụzọ kachasị nchebe nke na-egbukepụ Lenovo S650 site na Flash Toole na-edegharị ihe nchekwa ahụ na usoro ihe omume ahụ "Naanị Naanị". Usoro a na - enye gị ohere ịmegharị ma ọ bụ melite nzukọ mgbakọ nke gam akporo, yana ịpịgharịa ngwa OS ahụ na nke mbụ karịa arụnyere na ngwaọrụ ahụ, mana ọ dị irè naanị ma ọ bụrụ na ọ dịghị mkpa ịgbanwe akara (CN / ROW).
Gbanyụọ ngwaọrụ mkpanaka, wepụ ma regharịa batrị ahụ.
Mwepụta FlashTool ma bipụta faịlụ ahụ na-agbasasị n'ime ngwa ahụ, ma ọ bụrụ na nke a emebeghị.
Debe ihe nlele ahụ na nso akpa ihe nke ngwa ngwa - OWU.
Pịa "Download" - в результате программа переключится в режим ожидания девайса.
Соедините Микро-ЮСБ разъём выключенного аппарата и порт компьютера кабелем.
Через некоторое время, требуемое чтобы девайс определился в системе, начнется запись данных в системные разделы памяти S650. Enwere ike nyochaa usoro ahụ site n'ilele nkwụnye ọnọdụ njuputa na ala nke window Flashtool.
Ozugbo ngwa ahụ mezigharịrị ọrụ na ịtinye usoro ngwanrọ nke smartphone ahụ, windo ngosi ga-apụta "Download OK"nke na-akwado ihe ịga nke ọma nke manipulations.
Kwupu ekwentị site na komputa wee gbanye ya. Obere oge karịa ka ọ na-echere maka ịmepụta usoro osụgharị gam akporo OS.
Tupu iji ngwaọrụ ahụ, ọ na-anọgide na-ahọrọ ntọala nke mobile os dịka ịchọrọ mmasị nke aka gị.
ma weghachite data mgbe achọrọ.
Na ọnọdụ mgbe ịkwesịrị ịtinye sistemụ arụmọrụ Lenovo S650 nke ebe nchekwa ya (dịka ọmụmaatụ, iji gbanwee akara site na ROW gaa na CN ma ọ bụ akaebe; ọ bụrụ na ngwa ngwa dị na "Naanị Naanị" enyeghị nsonaazụ maọbụ ọ gaghị ekwe omume; ngwaọrụ ahụ bụ "oskarpichen", wdg.) a na - eji usoro usoro ederede edegharị ọzọ - "Ndozi Ndozi".
Mepee Flash Ngwá Ọrụ, budata faịlụ gbasaa na usoro ihe omume.
Na ndepụta ndetu ndepụta, họrọ "Ndozi Ndozi".
Jide n'aka na enyocha ngalaba niile, wee pịa "Download".
Jikọọ ngwaọrụ na ala agbapụta na PC - nchighari ederede ga-amalite na akpaghị aka. Ọ bụrụ na ngwa ngwa anaghị amalite, gbalịa jikọọ ngwaọrụ, mgbe wepụ batrị ahụ na ya.
Na-atụ anya windo ngosi "Download OK".
Kwupu eriri site na ama ma jide ya ruo oge "Ike" - mmalite nke usoro nbanye kpamkpam ga-amalite.
Nhọrọ. Ntugharị CN na-agbanwe agbanwe gaa na interface Bekee
Ndị ọrụ ndị na-arụ ọrụ gam akporo CN na Lenovo S650 ga-enwe ike izute ụfọdụ nsogbu mgbe ha na-agbanwe usoro mgbasa ozi na Bekee, ma ọ bụrụ na, n'ezie, ha na-asụ Chinese. Ntuziaka dị mkpirikpi na-esonụ dị na iji kwado ngwọta nke nsogbu ahụ.
Mgbe na desktọọpụ gam akporo, slide akwụkwọ ngosi ahụ. Na-esote, metụ ihe oyiyi ahụ.
Kpatụ aha nke atọ taabụ nke ngosipụta ihuenyo dị oke. Pịgharịa gaa na listi mepere emepe na mpaghara ahụ, ihe mbụ nke ihe ndị ahụ nwere aha "SIM" wee pịa nke atọ nke nhọrọ anọ.
Ọzọ - pịa akara mbụ na ndepụta na ihuenyo wee họrọ "Bekee". Nke a nile - osụgharị OS dị ka asụsụ a na-akọwawanye karịa asụsụ na-adịghị.
Na ọnọdụ ọ bụrụ na ọ dị mkpa iji weghachite ope ọrụ na netwọk na netwọk IMEI na ekwentị, soro ntuziaka dị n'okpuru ebe a. Ọ bụrụ na ị nwere nkwado ndabere nke mpaghara NVRAM kere site na iji FlashTool, nke a dị mfe ime.
Mepee ọkwọ ụgbọala na-agbanye ma gbakwunye ya faịlụ mkpofu nke usoro arụnyere na ekwentị.
Na keyboard, pịa n'otu oge "CTRL" + "ALT" + "V" iji mee ka Flash Tul "elu" mode. N'ihi ya, a ga-ede ọkwa na aha njirimara nke ngwa ahụ. "Ọnọdụ di elu".
Mepee menu "Ohere" ma họrọ ihe dị nime ya "Dee Nchekwa".
Ugbu a, ngalaba ahụ abanyela na usoro ihe omume ahụ. "Dee Nchekwa", banye n'ime ya.
Pịa na akara ngosi ahụ "Nchọgharị"dị nso na ubi "Ụzọ Ntuziaka". Na windo nhọrọ faịlụ ahụ mepee ndekọ ebe ebe ndabere dị "NVRAM"họrọ ya wee pịa "Meghee".
Uru nke mbụ nkwụsị mpaghara NVRAM na ebe nchekwa Lenovo S650 -0x1800000. Tinye ya n'ime igbe "Malite Adreesị (HEX)".
Pịa bọtịnụ ahụ "Dee Nchekwa"wee jikọọ ya na kọmputa.
Mgbe ederede zuru ezu, windo ga-apụta. "Dee Nchekwa OK" - enwere ike ịpụpụ amaokwu ahụ na komputa ma na-agba ọsọ na gam akporo iji chọpụta irè usoro ahụ na iji mee ihe ọzọ.
Nzọụkwụ 3: Wụnye unofficial (omenala) ngwa ngwa
Ebe kachasị mma ma dị mma maka ịmalite ọrụ nke S650 ma nweta nsụgharị ọhụrụ nke gam akporo na ihe nlereanya ahụ, kama inye ndị na-emepụta ya, bụ ntinye nke usoro arụ ọrụ na-arụghị ọrụ nke ndị na-anụ ọkụ n'obi na-eme nke a na-eme maka iji mee ihe na omenala.
A na-etinye ngwugwu nwere components nke arụmọrụ na-arụghị ọrụ n'ụba na netwọk ụwa, ma, ebe ị nụchara ntụziaka dị n'okpuru ebe a, ị nwere ike ijikọta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ omenala OS ọ bụla maka nhazi site na ebe obibi TeamWin Recovery (TWRP). N'otu oge ahụ, ọ dị mkpa iburu n'uche ụdị akara nke ncheta nke smartphone, nke a ga-arụnye site na omenala.
Dị ka ọmụmaatụ, anyị wụnye ROW- na CN-usoro nke gosipụtara onwe ha n'etiti ndị ọrụ ya n'aka nke a.
Hụkwa: Otu esi eji ngwa TWRP gbanyea ngwaọrụ gam akporo
Omenala maka nyochaa
A na-etinye nkwụnye aka na-akwadoghị arụ ọrụ site na iji ngwaọrụ mgbake na-agụnye ihe atọ dị mkpa. Ngwaọrụ tupu ịme usoro ndị a ga-agbanye ya na mgbakọ gam akporo. Iji gosipụta usoro nhazi nke ROW-firmware bu nke a na-agbanye RessurectionRemix v.5.8.8 dabere na Android 7 Nougat - otu n'ime ngwanrọ ngwanrọ kachasị ọhụrụ maka iji na ngwaọrụ ahụ.
Download omenala siri ike RessurectionRemix v.5.8.8 dabere na Android 7 Nougat maka smartphone Lenovo S650
Nzọụkwụ 1: Njikọ TWRP
Mbụ ịkwesịrị itinye ngwaọrụ ahụ gbanwetụrụ maka nrụpụta ROW-na ngwaọrụ. A na-eme ihe ahụ site na iji SP FlashTool, na ebe nchekwa ahụ nwere ihe oyiyi onyinyo ma gbasaa maka ịnyefe ya na mpaghara Lenovo S650 nwere ike ibudata na njikọ:
Download TWRP Recovery for Lenovo S650 Smartphone (ROW Markup)
Mepee Flash Toole ma kọwaa ụzọ faịlụ ahụ ga-esi na folda ahụ nwetara site na iwepụ ngwugwu wepụtara site na njikọ dị n'elu.
Jide n'aka na window windo ahụ dị ka nseta ihuenyo dị n'okpuru ebe a, ma pịa bọtịnụ iji malite ịdegharị akụkụ nke ebe nchekwa nke ngwaọrụ mkpanaka - "Download".
Jikọọ ngwaọrụ nwere nkwarụ na kọmputa ma chere ntakịrị.
Agbanyere omenala TWRP Recovery!
Ugbu a, gbanyụọ S650 na, na-enweghị bulie n'ime gam akporo, tinye ebe mgbapụta - pịa ma jigide bọtịnụ atọ niile "Vol +", "Vol -" ma "Ike" ruo mgbe akara abụọ TWRP gosipụtara na ihuenyo.
Na-esote, gbanwee gaa n'iche asụsụ Russian nke gburugburu ebe obibi site na ịpị bọtịnụ ahụ "Họrọ Asụsụ". Wee kwenye na ikikere ka ị gbanwee usoro nke usoro ahụ site na iji ihe dị na ala ihuenyo ahụ.
Pịa Rụgharịana mgbe ahụ "Usoro".
Tapnite "Adanyela" na ihuenyo na iji nyefee TWRP App. Ọ bụrụ na-ịchọrọ, site na TWRP arụnyere, ịnwere ike nweta ihe mgbọrọgwụ ma wụnye SuperSU - gburugburu ebe a na-atụ aro ịme nke a tupu ịmalitegharịa n'ime gam akporo. Họrọ nhọrọ achọrọ ma chere maka ịmalite ngwa osụgharị mobile.
Nke a mejupụtara ntinye aka na ngwaọrụ na nhazi nke ebe a na-agbanyeghị na TVRP.
Otu esi wepu Apple ID iPhone
Kedu usoro usoro csrss.exe na ihe kpatara ya ji ebu ihe
Mepụta ngwa ngwa USB USB na Windows 7
Ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na akara ngosi site na desktọọpụ ma ọ bụ ọrụ ọrụ kwụsịrị na Windows 10
Ọ bụ ezie na ọ bụ omenala ịkekọrịta ozi banyere onwe gị na ụfọdụ data onwe gị na netwọk mmekọrịta, ị naghị achọ onye ọ bụla ma e wezụga ndị enyi ịhụ ya niile. Ọ dị mma na ụfọdụ netwọk mmekọrịta, dịka ọmụmaatụ, na Odnoklassniki, ọ ga-ekwe omume imechi profaịlụ. Otu esi mechie profaịlụ na saịtị Odnoklassniki Ọtụtụ ndị ọrụ nwere mmasị na esi etinye mkpọchi na Odnoklassniki? GụKwuo
Ụzọ maka ịwụnye na-emelite ọkwọ ụgbọala maka Epson SX130 nbipute
SIV (View System Viewer) 5.29
https://termotools.com ig.termotools.com © Teamspeak 2019